gmail နဲ့ gtalk ကို လုံး၀မသုံးစေချင်ဘူး။ - MYSTERY ZILLION
gmail နဲ့ gtalk ကို လုံး၀မသုံးစေချင်ဘူး။
January 2009 edited April 2009 in Internet & Email
Computer မှာ Internet တော့သုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမယ့် gmail နဲ့ gtalk ကို လုံး၀မသုံးစေချင်ဘူး။gtalk ကိုတော့ Unstall လုပ်လိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ gmail ကိုတော့ ဘယ်လို ပိတ်ရမယ်မှန်းမသိလို့ပါ။အဲတာဘယ်လို ပိတ်ရမလဲဟင်။ကူညီကြပါဦး ။:77::77:
proxy 111.1.1.1:80 ကိုပြောင်းလိုက်...
ကျနော်က Gmail တော့သုံးခွင့်ပြုချင်တယ် ... Gmail ထဲက Chat ကိုတော့သုံးခွင့်မပြုချင်ဘူး ....
အဲဒါဆိုရင်ကော ... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ???? :106:
gmail ကိုတော့ ဘယ်လို ပိတ်ရမယ်မှန်းမသိလို့ပါ။အဲတာဘယ်လို ပိတ်ရမလဲဟင်။ကူညီကြပါဦး ။:77::77:[/quote]
gmail ကို အစကတည်းက မဖွင့်နဲ့ပေါ့။ မဖွင့်ရင် ပိတ်စရာမလိုတော့ဘူးထင်တယ်နော်။
ဒါလည်းလွယ်ပါတယ်.... သုံးတဲ့သူက ပိန်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့....
gmail ရဲ့အောက်ဆုံးနားလေးမှာ last login ip တွေဘာတွေအောက်နားမှာ..
basic html ဆိုတာကိုရွေးပြီးရင်... အဲဒါကို default ပေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်
နောက်တစ်ခါ၀င်ရင် chat မပါတော့ပါ... သုံးတဲ့သူက standard view ကို ပြန်မပြောင်း
ဟုတ်တယ် . . .
ကျွန်တော်လည်း အဲဒါပဲ သိချင်တာ။ သေချာလေး ဆွေးနွေးပေးကြပါ။
ကျွန်တော်တို့ Gtalk ကို banned လို့ရမယ်ဗျ။ Firewall Server ထိုင်ပြီး Port ကို ဘန်းလိုက်မယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုလဲ။ အဲဒါဆို အလုပ်ဖြစ်မလား။
ဒါပေမဲ့ မေး ကျတော့ ပြဿနာဖြစ်နေပြီ။ အင်တာနက်သုံးဖို့အတွက် HTTP Prot 80 ကိုတော့ ဖွင့်ပေးရမှာပဲ။ ဒါဆိုရင်လည်း မေးထဲကနေ ချက်ကြမှာပဲ။
အဲတော့ gmail ထဲက Chat Features ကို disable လုပ်ချင်တယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရင် ရနိုင်သလဲ။
Networking ဂုရုများ ပြောပေးပါ။
အရင်ကတော့ ကိုယ်တိုင် ပိတ်ခံရလို့.. အမျိုးမျိုးပြောခဲ့ကြတာလေ. ဗျာ.. :P
ကျွန်တော် နောက်လိုက်တာပါ.. ကျွန်တော်လဲ အဲဒီပိတ်နည်းမျိုးသိချင်ပါတယ်.. မေးလ်ပေးမသုံးချင်တာကတော့..။ cookies တွေကို accept မလုပ်ခိုင်းရင်လဲ.. ဂျီမေးလ်ဖွင့်မရပါဖူး.. တခြား.. ဆိုဒ်တွေကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိမရှိတော့ မသိပါဖူး။
Gmail မသုံးစေချင်လျှင် net nanny လို filtering software တခုခုသုံးကြည့်ပါလား
ဒါပေမဲ့ သုံးတဲ့လူက ကျော်ခွတတ်ရင်တော့ ပိတ်လို့မရနိုင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် PC monitoring software တွေသုံးပြီးစောင့်ကြည့်ပေါ့ အဲဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ စက်တော့နည်းနည်းလေးမယ်။
gmail မသုံးစေချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ gmail ထဲက Chat Features ကို disable ပေးစေချင်တာပါ။ entire network တစ်ခုလုံးအတွက်ပါ။ တွေ့ပါပြီ။ ဒီလိုပြောထားပါတယ်။
blocking DNS lookups to chatenabled.mail.google.com, by returning 127.0.0.1
အသေးစိတ်ကို Google Help မှာ ကြည့်ပါ။
Gtalk ကို ကော ဘယ်လို ပိတ်လို့ ရမလဲ။ သိပါရစေ။
Disabling Gmail's chat features for your entire network
We understand that it's sometimes necessary to disable instant messaging services onanetwork. If you need to prevent Gmail users on your network from chatting, we suggest blocking DNS lookups to chatenabled.mail.google.com, by returning 127.0.0.1.
ကျနော် ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူး ... လုပ်ပုံလုပ်နည်းသိရင် သေချာရှင်းပြပေးကြပါဦးဗျို. .... :77:
Office မှာ mail ထဲကနေ Chat တဲ့လူတွေကို Prohibit လုပ်ဖို့ တော်တော်အသုံး၀င်တဲ့ နည်းမို့လို့ပါ။
အားလုံးက ပိတ်မယ်၊ တားမယ်ဆိုတာတွေချည်းပါပဲလား။ ဘော်ကျန်း(ဘန်းကျော်) ဘ၀တောင် မလွတ်သေးဘူး။ သိပ်လည်း အသံမထွက်ကြနဲ့ဦးနော်။ ဟိုက ကြားသွားလို့:D:D:D. တားဆီးတဲ့ အနေကနေတောင် ကောင်းကောင်းမလွတ်သေးဘူးဗျ။ မလုပ်ကြပါနဲ့။
အားလုံးကို ဟာသအနေနဲ့ပြောတာနော်။ တမျိုးမထင်ကြပါနဲ့။
spoof your DNS:)
and it would be the easiest way:)
ကျွန်တော်ကတော့ မကောင်းတဲ့ဟာတွေ အကုန်ပိတ်ချင်တာဗျို့ ... ဥပမာ - နိုင်ငံရေး၀က်ဘ်တို့ ... ဟိုဟာဒီဟာဆိုက်တွေကိုပေါ့နော် ... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆိုင်လာတဲ့သူ(ယောကျ်ားသား)များဟာ မိန်းကလေးရှိလည်း အားမနာ ပေါ်တင်ကြီးတွေ ကြည့်နေကြတော့ သွားပြောလို့လည်းမရလို့ဗျ ... တစ်ခါတည်း အကုန်လုံးကို ပိတ်ထားလိုက်ရင် ပိုအဆင်ပြေမလားလို့ ... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီကြပါဦး ... Software လေးများ ရှိရင်လည်း မစကြပါဦးနော် .... ချစ်သော MZ မှ ကိုကြီးများ ...:77::77::77::77::77:
ရတယ်။ Proxy Server တစ်ခုထိုင်ပြီး Banned ရင်ရတယ်။
Windows အတွက်ဆိုရင် ISA ။
Linux မှာဆိုရင် Squid။
နောက် အခု နောက်ပိုင်း Router တွေက တော်တော်လေး အဆင့်မြှင့်လာပြီ။ သူ့မှာ Firewall ဖန်ရှင်တွေပါ ပေါင်းထည့်လာတယ်။ Router ကို အသုံးပြုပြီးလည်း Banned လို့ရပါတယ်။ ( အင်တာနက် ကဖေးတွေ အတွက်ပြောတာပါ။ )
ISP အဆင့်ဆိုရင်တော့ . . . ဟဲ ဟဲ . . . အဲဒါလေးကို စိတ်၀င်စားပါတယ်။ ISP အဆင့် ဘယ်လို Banned သလဲ။ အဆင်ပြေရင် ဆက်ဆွေးနွေးပေးပါ။
Blue Coat တို့ ဘာတို့ပေါ့။
အဲလိုမဟုတ်ဘူး Bro ရဲ. ...
Office မှာ ... Gtalk Chat နေလွန်းလို့ ..... Gtalk Software ဖြုတ်လိုက်တော့လဲ ... Gmail ထဲကနေ Chat ကြတာ ... Office ဆိုတော့ အဲလို chat ခွင့်မရှိဘူးလေ....။
Internet ကို စိတ်ကြိုက်သုံးခွင့်ပေးထားပါတယ် .... Chatting ကိုပဲ တားတာပါ ။
အဲဒါ ....... Gmail ထဲက Instant Messaging ကို ပိတ်ထားချင်လို့ ( Network မှာ ရှိတဲ့ Computer တွေအားလုံးကို ) .... Instruction ပေးကြပါဦးလို့ ...... :77:
ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော် ... ဘယ်လို Proxy Server ထိုင်ရမလဲ .... အခု ကျွန်တော်က စက်တွေကို Direct Connection နဲ့ပဲ ပေးထားတာ ... ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း IP Address မသိဘူးဗျ ... အခု (မလေးမှာ)က IP နဲ့ ဘယ်သူမှ မသုံးကြဘူး ... Direct Connection နဲ့ပဲဲ သုံးကြတယ် ... ကျွန်တော်က စက်အလုံးတိုင်းမှာ ဥပမာ - ဆော့ဖ်၀ဲထည့်ပြီးပိတ်လို့ရမယ့်ဟာလေးများ ရှိလားလို့ ... လုပ်ပေးကြပါနော် ချစ်ကိုကြီးတို့ .....
Router တော့ သုံးတယ် .. ဘာဆော့ဖ်၀ဲမှကို သုံးစရာမလိုတောင် Direct တွေချည်းပဲဗျ....
လွယ်ပါတယ်ဗျာ gtalk ကို Install ချပြီးတော့ bagan ကလိုင်းပဲဝယ်လိုက်လေ mpt ကမဝယ်နဲ့
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘဂန်က gmail ကိုဘန်းထားတယ်လေဗျာ http://mail.google.com ဆိုရင်ဝင်လို့မရဘူးလေ https /mail.google.com မှ bagan လိုင်းနဲ့ဆိုဝင်လို့ရတာ
ဒါကြောင့်စသုံးမယ့်သူတွေကို http မှာ s ထည့်ပြီးမှယင်လို့ရတယ်လို့မပြောပြနဲ့ပေါ့ :D:D
ဘာလို့ဒီလောက်ပိတ်ချင်ရတာလဲ..ဟိုတုန်းက အားလုံးကို ပိတ်ခဲ့တုန်းက ခံရခက်ခဲ့ကြသားဘဲ..
Humanright ရှိနေတယ်လေ..အင်တာနက်ကို Access ပိတ်လိုက်ပေါ့..ဘာမှလုပ်မရတော့အောင်..
You will understand when you work in Public Organizations or INGOs.
We more appreciate "Human Right".
However, " Home has home rule, Office has office rule".
ရုံးတွင်း ပိတ်မှာ။ Local ပိတ်မှာကို ဆွေးနွေးနေကြတာပါ။
ရုံးချိန်အတွင်း အလုပ် မလုပ်ဘဲ gtalk ပဲ တော့ နေကြလို့။ ဒါကို Policy အနေနဲ့ ပိတ်ကမယ်လေ။ အဲဒါကို ဆွေးနွေးနေကြတာပါ။
သားတို့ကို ပုဂံကလို့ ထင်နေတာလားဟင်။ ဟီ ဟီ။
ကြည့်ရတာ ... Gmail ထဲက Gchat ကို ပိတ်လို့ရဘူးနဲ့တူတယ် ....
ဘယ်သူမှလဲ မပြောကြတော့ဘူး .....
As he said that would be the easiest way to block chatenabled.mail.google.com
Spoofing the DNS or useaProxy server to block.
အားလုံးပဲခင်ဗျာ။ Application Verifier ဆိုတာလေးသုံးကြည့်ပါဦး။ Install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲ့ဒီ application ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Ctrl + A (သို့မဟုတ်) Add Application နှိပ်ရင် အခုလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ် ကိုယ်ပိတ်ချင်သော Application များကိုထပ်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ e.g : googletalk.exe ပြီးရင် Save လုပ်ပြီး Exit လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်ပိတ်ထားတဲ့ Application e.g : googletalk.exe ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီမှာ အခုလို Box ကျလာပါလိမ့်မယ်။
အကယ်လို ပြန်သုံးစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Application Verifier ကိုဖွင့်ပြီး အောက်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ဖွင့်ပေးချင်တဲ့ application ကိုရွေးပြီး delete application ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
အပိ်တ်ခံထားရတဲ့ user က googletalk.exe ကို tolover.exe လို့ file name ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ googletalk.exe က ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ....:)):)):)):))
အဲ့ဒီ application လေးလိုချင်ရင်တော့တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ အခုတော့ ကိုယ်တိုင် စမ်းပြီး သဘောမကျတာရယ်.. Dial-up ဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့် မတင်ပေးတော့ပါဘူး။
already told ya that Spoof Your DNS
for the gtalk, u can use acl via the cmd
for the gmail, if u spoof ur dns, it'll lead the user to the another fake page and however he/she try, it won't lead to the real page or DNS
(except for the some brilliant users:D)
g-talk ကလွယ်တယ်လေဗျာ uninstall ချလိုက်ပေါ့ဗျ:D
2. paste this in the run box "C:\_WINDOWS\_system32\_drivers\_etc"
4. Double-click the "hosts" file
5. open with Notepad
6. paste this "127.0.0.1 chatenabled.mail.google.com " below "127.0.0.1 localhost"
when you try to log in your Gmail, your chat box will be said that "Your internet connection is experiencing problems or your network administrator has blocked Gmail chat. Learn more"
တရားဝင် ရုံးအမိန့်ထုတ်ပြန် ပြီးစာကပ်လိုက်ပါ Gmail နှင့် Gtalk လုံးဝလုံးဝ မသုံးရပါ တွေ့ရှိက ထိရောက်စွာအရေး ယူခြင်းခံရမည် လို့....... အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလို့ ထင်ပါတယ်.... :6::6::6:
everybody can make the way that u suggested
i can't consider that why dun u get the concept of this thread:14:
the main goal of this thread is to know the technique
not for this damned useless way:14:
sorry guy i make joke for funny... coz every body discuss only way is lazy so i makeajoke for funny ... that my mistake sorry for that ... sorry for that every body i'm sorry just for funny only ...:106::106::106: